I-Carbon dioxide iphula izinga elisha lonke Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngesikhathi se-2016 ukugxila kwe-carbon dioxide noma i-CO2 emkhathini kwaphula irekhodi elisha lomlando. Kwakunjalo ukuthi Umhlaba wawungasazi isimo esifanayo phakathi kweminyaka eyizigidi ezintathu nengu-3 edlule. Ngaleso sikhathi, izinga lokushisa lomhlaba wonke laliphakathi kuka-2 no-3ºC ephakeme kanti nolwandle lwalungamamitha ayi-10 kuye kwangama-20 ukuphakama kunamuhla.
Siyini isizathu salokhu kukhuphuka ezingeni le-CO2? Sizokutshela.
Kusukela ku-Revolution Yezimboni (1750), ubuntu bube nezinguquko eziningi eziwuvumele ukuthi ukhule futhi uphile impilo entofontofo. Ngokwenza njalo, yaqala ukusebenzisa umhlaba ngokuqinile, igawula amahlathi futhi yaxhaphaza izibaseli ngenhloso yamandla. Konke, Yize ekuqaleni sasikholelwa ukuthi ngeke kube nomthelela omubi emhlabeni, kancane kancane siyabona ukuthi sasinephutha.
Ngokusho kweFinland Petteri Taalas, uNobhala Jikelele we-World Meteorological Organisation (WMO), »uma singakunciphisi ngokushesha ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya, ikakhulukazi i-CO2, sizobhekana nokukhuphuka okuyingozi kwezinga lokushisa esikhathini esisele sekhulu leminyaka, ngenhla ngenhloso ebekiwe eSivumelwaneni Sezulu saseParis. '
Isithombe - WMO.int
Futhi ngukuthi, amazinga awenzi kodwa ayenyuka. Uma ngo-2015 ukuhlushwa kwe-carbon dioxide kwakuyizingxenye ezingama-400,00 ngesigidi ngasinye (ppm), ngo-2016 ifinyelele ku-403,3ppm, emele i-145% yalokho eyayiyikho ezikhathini zangaphambi kwezimboni (ngaphambi kuka-1750).
Ukuthola ukuthi ukugxila kwe-CO2 emoyeni kuhluka kanjani, abacwaningi bathatha amasampula ama-ice cores amadala bese bewahlaziya. Ngakho-ke, bakwazile ukuthola ukuthi, ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo ezinqala zokuyivimba, umhlaba esiwaziyo uzohluka kakhulu kunesizukulwane esizayo esizayo esizokwazi.
Ngeminye imininingwane, ungachofoza lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-Carbon dioxide iphula izinga elisha lonke